Ducada Gabadha Guadalupe. ? Ilaalinta, Amparo iyo Mucjisada
Ducada bikradda ka Guadalupe kor u qaadida iimaanka iyo qalbiga ficil is-hoosaysiinta oo muujinaya dareenka uu qalbiga bini aadamka u leeyahay inuu caawimaad ka codsado aadanaha ruuxiga ah.
Si kasta oo ay tahay waqtigan aan marayno, salaadda waxaa sameeya dadka soo baahan.
Ma jiraan wax aan macquul aheyn marka aan u qaadanno salaadda sidii aalad loo adeegsado la-dagaallanka dagaallamayaasha socda ayaa maalinba maalinba ina siiya.
Waxaan weydiisan karnaa waxa aan u baahanahay iyo xitaa waxyaabaha kuwa noqday riyooyinkeenna iyo hamigeenna oo weli ku sii jira gudaha nafsadeena iyo inaanu cid na ogayn mooyee.
1 U ducee gabadha reer Guadalupe Waa kuma bikradda reer Guadalupe?
1.1 Ducada gabadha bikradda ah ee Guadalupe ilaalinta
1.2 Salaad si aad u codsato badbaadin bikradda ah ee Guadalupe
1.3 Salaadda bikradda ah ee Guadalupe in la waydiiyo mucjiso
2 Ma dhihi karaa salaadda oo dhan?
U ducee gabadha reer Guadalupe Waa ayo gabadha Guadalupe?
Waa muuqaal u eg Maryantii bikradda ahayd 1531-kii Mexico.
Waxaa la ogyahay in qofkii ugu horreeyay ee arkaa uu arko Juan Indian-ka Indian halka uu ku sii jeedo jidka.
Waxay sheegeysaa sheekada in gabadha bikradda ah ay weydiisatay inay dhisto macbud isla markaana ay u gudbiso farriin dhammaan dadka suurta gal ah oo ka bilaabaya hoggaamiyaha kiniisadda.
Ninka reer Hindiya ee Juan Diego ayaa sidaas yeelay, sida loo aaminay oo dhan, ma ahayn wax fudud maxaa yeelay qofna ma rumaysan isaga sababta oo ah, sida mucjiso kasta, waxaa lagama maarmaan noqotay in la arko calaamado in waxa Hindidu ku tidhi ay run tahay.
storia oo ay bikraddu weydiisatay inuu dhiso macbud iyo taas farriin u dir dadka oo dhan suurta gal laga bilaabo kiniisadda.
Hindida Juan Diego sidaas ayuu yeelay, wax walboo sidii loogu aaminay, ma aheyn wax fudud maxaa yeelay qofna ma aamineynin maxaa yeelay, sida mucjiso kasta oo kale, waxay ahayd lagama maarmaan in calaamadaha qaarkood la arko in waxa Hindidaas dhahay ay run yihiin.
Hindi ayaa tilmaam cusub ka heleysa Virgin halkaasoo lagu aaminay in ay raadiso ubaxyadii ku yaal buurta dusheeda, mar labaad ayuu adeecaa amarka oo wuxuu raadiyaa ubaxyo cusub si uu ugu soo bandhigo hoggaamiyaha kiniisaddu buste. Markay ubaxyadu buste ku dhacaan, muuqaalka maanta loo yaqaan 'Virgin of Guadalupe' waa la arki karaa.
Maanta, basilica ee Santa María de Guadalupe waxay noqotay macbudka diineed ee dunida lagu booqdo.
Qiyaastii labaatan milyan oo diimeed Waxay u yimaadaan sanad walba inay sheegtaan iimaankooda oo ay abaalmariyaan gabadha mucjisada ah.
Ducada gabadha bikradda ah ee Guadalupe ilaalinta
Gabadha barakeysan ee Guadalupe, Hooyo Ilaah, Marwo iyo Hooyade. Kaalay halkan adigoo sujuudsan hortiinna qoduuska ah, oo aad naga saartay oo lagu shaabadeeyey tilmaamaha Juan Diego, oo ah ballanqaad jacayl, wanaag iyo naxariis.
Erayadii aad ku tidhi Juan oo leh damqasho aan la qiyaasi karin ayaa weli ku dhawaaqaysa: "Wiilkayga aan jeclahay, Juan oo aan u jeclahay mid yar oo jilicsan," marka, oo aad u dhalaalaysa quruxda, aad ka soo hor muuqatay indhihiisa buurta Tepeyac. Naga dhig kuwo mudan inaan maqalno erayadaas isla qoto dheer oo ku jira nafaheena.
Haa, waxaad tahay hooyadayada; Hooyada Ilaahey waa Hooyadeenna, Eebaha ugu naxariis badan, naxariis badanna.
Iyo inaad noqotid Hooyadeena iyo hoygayaga hoos-u-haynta ilaalintaada waxaad ku sii nagaatay muuqaalkaaga Guadalupe. Gabadha barakeysan ee Guadalupe, waxaad muujisaa inaad tahay Hooyadeen.
Naga difaaco jirrabaadaha, Nagama raaxee aargudashada, Oo naga caawi baahiheenna oo dhan.
Khataraha, cudurada, silcinnada, qadhaadhka, go'itaanka, saacadda dhimashadeena, nagu eeg si indho qabad leh weligiisna ha naga tegin.
Maryantii bikradda ahayd, sidii hooyo wanaagsan oo kale, yaqaan sida loo bixiyo difaac adag waana run dhammaan kuwa u aqoonsada inay hooyadeed tahay.
Ku soo dhawaanshaha iyada raadinta magangalyada waa ficil iimaan leh, dhiirranaan iyo daacadnimo leh. Waxaan weydiisan karnaa badbaado mar kasta oo aan ugu baahan nahay annaga, xubin reerka ka tirsan ama saaxiib.
Xitaa waxaa jira kuwa iyagu adeegsada tan duco Alaabada qaar ee alaabta, salaadda qaybtan waxay u ekaan kartaa mid toos ah laakiin hooyo waxay ogtahay sida loo daryeelo ilmaheeda iyo wax walboo ay leedahay.
Uma tagi karno iyada fikirka iyada ma caawin karto laakiin qalbi furan inuu nala hadlo oo na hago waxa aan ku qasban nahay inaan markasta sameyno.
Salaad si aad u codsato badbaadin bikradda ah ee Guadalupe
Oh Immaculate Virgin, Hooyo Ilaaha runta ah iyo hooyada Kaniisadda! Adiga, kan aad meeshan ka muujiso naxariistaada iyo raxmaddaada dhammaan kuwa weydiista badbaadintaada, Dhegeyso ducada aan si kalsooni buuxda leh aan ula hadlayno una tusno Wiilkaaga Ciise, Bixiyahayaga keliya.
Hooyo naxariis badan, Macallinka allabari qarsoon oo aamusnaan ah, adiga, oo u soo baxa inaad la kulanto dambiilayaasha, maanta waxaan quduus uga dhignaa nafteenna oo dhan iyo jacaylkeenna oo dhan.
Waxaan sidoo kale u hibeyneynaa nolosheena, shaqadeena, farxaddeena, cudurada iyo xanuunkeena.
Nabad sii, cadaalada iyo barwaaqo dadkeena; maadaama wax kasta oo aan haysano iyo inaan ku hoos jirno daryeelkaaga, Marwada iyo hooyadeen.
Waxaan rabnaa inaan adiga kuu noqono oo aan kugula soconno dariiqa aaminka ah ee Ciise Masiix ee Kaniisadiisa: ha u daynin gacantaada jeceshahay.
Gabadha bikradda ah ee Guadalupe, Hooyooyinka Ameerika, waxaan kaa codsaneynaa kiniisadaha oo dhan, inaad hoggaamiso kuwa aaminka ah ee jidadka nolosha Christian adag, jacaylka iyo u adeegista Ilaah iyo nafta.
Ka fikir goosashada this weyn, oo Ilaah ka baryayaa inuu ku abuuro gaajo quduusnimada ee dadka oo dhan ee Ilaah, iyo siiyo xirfado badan oo wadaaddada iyo kuwa diinta, iimaanka ku xoog badan, iyo kuwa wax siiya sirta ah waxyaalaha qarsoon ee Ilaah.
Ilaalinta, daryeel, jacayl, perdón iyo waxa aad rabto oo dhan inaad weydiiso, dhegihiisu waxay diyaar u yihiin inay maqlaan soocitaanka carruurtiisa.
Iimaanku waa shuruud lama huraan ah.
Ereyga Eebbe waxay noo sharraxayaan inaan weydiinno rumaynta inay jirto, taasi waa, waa inaan uga tagnaa salaaddayada annagoo og inay maqleen oo, xitaa ka sii badan, ka jawaabeen.
Amparo waa mid daruuri ah waana in qofku had iyo jeer waydiisto in dareenka lagahelo qalbiga.
Ma ogin mustaqbalka waana sababtaas in salaaddan ay muhiim u tahay inaan gacmahayaga uga tagno qorshayaashayada iyo tallaabo kasta oo aan ku tala jirno inaan qaadno.
Taasi waa sababta salaadda bikradda ee Guadalupe ay muhiim u tahay.
Ilaalintiisu marwalba nolosheena ha ku jirto, barakotiisuna waligiis naga tagi mayso annaga iyo qoyskeenna iyo asxaabteenna.
Codsashada badbaado qof gaar ah waa ficil jacayl, ma ahan lagama maarmaan in shumacyada loo shido ama loo diyaariyo jawi hore ducadan oo u ekaan karta waxyar oo fudud laakiin runtii waa awood badan, waa inaad rumeysan tahay, wax kale looma baahna.
Salaadda bikradda ah ee Guadalupe in la waydiiyo mucjiso
Gabadha barakeysan ee Guadalupe, Hooyada iyo boqoradda waddankeena. Halkan waxaad naga dhigteen kuwo is-hoosaysiiya oo u sujuudda sankaaga cibaadada leh.
(Meel dhig dalabkaaga)
Annagu adigaan rajo ku qabnaa. Waxaad tahay nolosheena iyo raaxadaada.
Markaad ku hoos jirtid hooskaaga ilaalinta, iyo jilibka hooyadaa, waxba kama baqi karno.
Naga caawi xajkayaga dunidan oo noo shafeeco Wiilkaaga ilaah ah xilligan xaadirka ah geerida, si aan u gaarno badbaadada weligeed ah ee nafta.
Mucjisooyinka waa waxyaabaha aan aaminsanahay inaynan macquul aheyn in lagu gaaro xoogagga aadanuhu.
Waa eray loo adeegsado codsiyada cudurrada, sida laga soo xigtay sayniska caafimaad, daawo ma leh.
Si kastaba ha noqotee, erayga mucjisada ah waxaa loo adeegsan karaa duruufo badan oo badan sida xaaladahaas oo aan ku sugaynay lacag aan suurta gal ahayn in la gaaro ama markii luminta xubin qoyska ka mid ah ay dhibaato soo gaartey oo daqiiqad ilaa mar kale ay u muuqato amaan iyo cod.
Mucjisooyinku waa masaafada tukashada oo waxay u sheegaan oo keliya iimaan yar. Wax aan macquul aheyn ma jiraan.
Ma dhihi karaa salaadda oo dhan?
Waad tukan kartaa waana inaad ku tukataa salaadda cibaado kasta.
Muhiimadu waxay tahay in ducadii gabadha ee Guadalupe lagu tukaday iyada oo leh iimaan badan iyo aaminaad qalbigeeda ku jirta.
Waxaad doorbideysaa inaad rumeysato awoodaha dhabta ah ee sheydaan oo waxaad u baahan tahay inaad rumeysan tahay inay ku caawin doonto.